in Celebrity, General Knowledge
မင်းသမီးဒိုင်ယာနာသည် အသက် (၃၂) အရွယ်မင်းသား ချားလ်စ်နဲ့ လက်ထပ်ချိန်မှာ အသက် (၂၀) အရွယ်မှာပဲ မင်းသမီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၁၆ နှစ်အတွင်းမှာပဲ သူမဟာ ၂၀ ရာစုရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမှာ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ပြီး လူတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်း ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် မင်းသမီးဒိုင်ယာနာကို ပြည်သူ့မင်းသမီးလို့ ခေါ်ကြတာလဲ?
၁။ သူမဟာ ပရိဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်
မင်းသမီးဒိုင်ယာနာက လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်တွေက တစ်ခြားလူတွေထက် ပရိဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုမိုအကျိုးပြုခဲ့တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ သူမဟာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတွေမှာ ကာကွယ်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ကင်ဆာသုတေသနလုပ်ငန်းနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအသိပညာနှင့် တစ်ခြားပရဟိတလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ ဆေးရုံတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေ၊ မူးယစ်ဆေးစွဲနေသူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ မတွန့်ဆုတ်တတ်သူမျိုးဖြစ်ပြီး လူတိုင်းအတွက် သူမနှလုံးသားမှာ နေရာတစ်နေရာရှိနေစမြဲပါပဲ။
The Princess of Wales helpingapatient at Mother Theresa’s hospice in Calcutta, India, 15th February 1992. (Photo by Jayne Fincher/Getty Images)
သူမလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးသော ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ AIDS အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေအတွက် ဗြိတိန်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးအထူးစင်တာအဖြစ် သူမကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ လူနာတွေဆီကို လည်ပတ်ခဲ့ပြီး HIV လူနာတွေနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး သူမရဲ့ သနားခြင်းဂရုဏာကို ပြကာ HIV ဟာ ထိတွေ့ရုံနဲ့ မကူးစက်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပြုအမူဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးအတွက် AIDS ရောဂါသည်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးစာမျက်နှာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ၎င်းမှာ ဆက်လက်ပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့သလို ရောဂါကာကွယ်ဆေးသုတေသနရှာဖွေရာမှာလည်း ကူညီခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူမက အာဖရိကန်မှာ ပြဿနာတွေဆီကို အာရုံရောက်သွားပြန်ပါတယ်။
၂။ သူမဟာ လူတွေကို အမှန်တကယ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်
သူမရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုလုံးမှာ မင်းသမီး Diana ဟာ ”ကျွန်မက ဦးနှောက်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ နှလုံးသားနဲ့ ဦးဆောင်သူပါ။ ထွက်ခွာသွားတော့မယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်ပြပေးပါ” လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူမပြောခဲ့သလိုပဲ သူမကိုယ်တိုင်ပဲ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
၃။ သူမဟာ အလွန်တာဝန်ကျေပွန်သော မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်
ဒိုင်ယာနာဟာ သူမရဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမမှာ ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေရှိသူပါ။ သူမရဲ့ ကလေးတွေကို အချိန်ပြည့်ကလေးထိန်းကျောင်းမှာ ထားလေ့မရှိဘဲ ၎င်းစည်းမျဉ်းကိုယ်တိုင် သူမကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ သာမန်မိခင်တစ်ဦးလိုပါပဲ။ ကလေးတွေနဲ့ ပျော်စရာအချိန်တွေဖန်တီးခဲ့သလို ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် တီရှပ်တွေကိုလည်း ဝတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ဝီလျံရဲ့ ကျောင်းမှာ မိခင်တစ်ဦးရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာတောင် ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
၄။ သူမဟာ style icon တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်
မင်းသမီးဒိုင်ယာနာဟာ ’80s’ နှင့် ’90s’ ခုနှစ်တွေအကြားမှာ ဖက်ရှင် trendsetter တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းတော်တော်များများကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွင်သာမကဘဲ သူမရဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ အမူအရာတွေကလည်း တစ်ခေတ်ထခဲ့ပြီး သူမလိုပြုမူပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
လူသားချင်းဆိုင်ရာ စာနာထောက်ထားမှုခရီးလည်ပတ်စဉ်အတွင်းမှာ နွေးထွေးပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်လှပနေတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတွေဆီကို လည်ပတ်တဲ့အခါ သူမဟာ သူမရဲ့ ဦးထုပ်ကို မဆောင်းခဲ့ပါဘူး။
၅။ သူမဟာ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်ပြီး ဟာသဉာဏ်ရွှင်သူတစ်ယောက်ပါ
မင်းသမီးဒိုင်ယာနာကို ကောင်းကောင်းသိကြသူတိုင်း ဒိုင်ယာနာဟာ ဟာသဉာဏ်ရွှင်သူလို့ ပြောကြပါတယ်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဘာကြောင့်အလှူအတန်းတွေလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ သူမက ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။ တကယ်တော့ သူမဒီလိုလုပ်နေရတဲ့အကြောင်းအရင်းက သူမတကယ်ချစ်တဲ့အရာကို လုပ်နေတာပါ။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ Micheal Jackson ရဲ့ Concert တစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့ ”Dirty Diana” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကိုယ်တိုင်မသီဆိုဖို့ ဘေးဖယ်ထားခဲ့ပေမယ့် ဒိုင်ယာနာကတော သီဆိုစေခဲ့ပါတယ်။
၆။ သူမဟာ နှိမ့်ချပြီး လူတွေ ချစ်သူပါ
တော်ဝင်မိသားစုက သာမန်လူတွေနဲ့ အမြဲတမ်းအဝေးဆုံးမှာ ရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒိုင်ယာနာကတော့ အေးစက်စွာနဲ့ပဲ သာမန်လူတွေနဲ့ စကားစပြောခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ တော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ပေမယ့် သူမနဲ့ စကားပြောဆိုတဲ့ မည်သူမဆို ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဖော်ရွေတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုကို အသုံးချပြီး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေအများအပြားကို ပြုလုပ်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ နက်ရှိုင်းစွာ ချစ်ခဲ့သူပါ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် သူမအသက် ၃၉ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်တဲ့အခါ ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက ဝမ်းနည်းပူဆွေးခဲ့ကြရပါတယ်။ သူမရဲ့ စျာပနကို လူပေါင်း ၂.၅ ဘီလီယံက စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူမရဲ့ မင်္ဂလာပွဲထက် ၃ ဆပိုများခဲ့ပါတယ်။
သန့်ရှင်းရေးအတွက် ရှာလကာရည်ကို ဘယ်အရာတွေမှာ အသုံးမပြုသင့်သလဲ?
ရှာလကာရည်ကို အိမ်သန့်ရှင်းရေးတွေမှာ အမျိုးမျိုး အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် တချို့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုလို့မရပါဘူး။ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ မသုံးသင့်တာလဲဆိုတော့ ၁။ Tablets တွေ ဆဲလ်ဖုန်းတွေပေါ်က မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အသုံးမပြုပါနဲ့ ရှာလကာရည်နှင့်အတူ စခရင်ကို သန့်ရှင်းခြင်းက သူတို့ရဲ့ အုပ်ထားတဲ့ အလွှာ...